Weerar Gaadiid Looga Gubay Kolanyo American Ah. – Calamada.com
Weerar Gaadiid Looga Gubay Kolanyo American Ah.
calamada July 31, 2019 1 min read
Weerarkan oo ah Kamiinkan Waxey Ciidamada Mujaahidiinta imaarada islaamiga Afghanistan ay u dhigeen Kolanyo ka tirsan Ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka kuwaasi oo ku socdaalayay Qeybo Ka Mid Ah Waqooyga Dalka Afghanistan.
Weerarkan Dhabba galka ah waxa uu sigaar ah kaga dhacay duleedka Magaalada xarunta u ah Wilaayada Baglan, Iyadoona Kamiinkan khasaara culus lagu gaarsiiyay Kolanyada Saliibiyiinta Mareykanka ah.
Warbaahinta Imaarada islaamiga Afghanistan ayaa baahisay in Kamiinkan Ciidamada Mujaahidinta ay ku gubeen Labo Gaari oo ah Noocyada Xamuulka Sahayda ay ku qaataan Saliibiyiinta Mareykanka, Waxeyna Mujaahidiinta Gacanta ku dhigeen isagoo bad qaba Hal gaari Xamuul ah oo qeyb ka ah gaadiidkii ay wateen Kolanyadaasi la weeraray.
Sidoo kale Weerarkan Dhabba galka ah ee ka dhacay Waqooyga Afghanistan ayaa Khasaara Nafeet lagu gaarsiiyay Saliibiyiinta Mareykanka.
Weerarka dhabba galka ah ayaa kusoo aadayaa xilli Guutada Madaafiicda Ee Imaarada islaamiga Afghanistan Madaafiic ku garaaceen Saldhiga ugu weyn Saliibiyiinta Mareykanka ay ka sameysteen Dalka Afghanistan kaasi oo ku yaala Degmada Bagram ee Wilaayada Barwaan oo dhacda Waqooyga Afghanistan, Iyadoona Duqeyntaasi khasaara kala duwan lagu Gaarsiiyay Saliibiyiinta Mareykanka.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 28-11-1440-Hijri.
Next: Dhageyso: Maxkamad Islaamiga ah Oo Xukun Dil ah ku fulisay Nin Fal Liwaad ah sameeyay